Budata Real Racing 3 APK maka Android
Budata Real Racing 3
Free Budata maka Android (6.10 MB)
Budata Real Racing 3,
Real Racing 3 bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke ndị injinia EA kwadebere na ọ bụ egwuregwu nke atọ na usoro Real Racing.
Maka ụdị a, nke akwadoro maka ndị ọrụ gam akporo, anyị ga-ebu ụzọ kwuo na mgbe ebudatara egwuregwu ahụ, a ga-ebudata nnukwu faịlụ echichi site na egwuregwu ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka 6 MB na ụlọ ahịa ahụ, egwuregwu ahụ na-ewe ohere buru ibu karị.
Real Racing 3, nke na-akwado ọtụtụ ụgbọ ala ikikere nke ndị na-emepụta ụgbọ ala okomoko dị ka Porsche na Lamborgini, nwere mkpokọta ụgbọ ala 45. Na mgbakwunye, a na-enye ọtụtụ narị ụdị agbụrụ na ihe karịrị ọmụmụ iri abụọ.
Ka anyị gbakwunye na egwuregwu ahụ adịghị ka ihe kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ nokpuru afọ 13.
Real Racing 3 Ụdịdị
Nha faịlụ: 6.10 MB